Guta Rangu: Roll uye Nyora Kuona Kwekutanga - Game Point - Bhodhi uye Vhidhiyo Mitambo
Roll uye nyora mitambo inoramba iri mufashoni. Mitambo mitsva yemadhayisi iri kugara ichionekwa, mune dzimwe nguva sekugadziridzwa kwemitambo yebhodhi yakatoburitswa: semuenzaniso mutambo webhodhi Guta Rangu, iro munyori ane mukurumbira Reiner Knizia iye zvino akagadziridza kuita mutambo wemuchinjikwa.
Kubva ku2020 Game of the Year nominee Mutambo webhodhi Guta Rangu, Roll & Nyora offshoot ikozvino yaburitswa. Mutambo uyu zvakare nemunyori Reiner Knizia, anoratidzwa naMichael Menzel uye akaburitswa naKosmos Verlag. Ndeyevanhu vanosvika vatanhatu vane makore gumi zvichikwira uye inotora maminetsi makumi maviri pamutambo. Neimwe nzira, iwe unogona zvakare kutamba wega.
Iwe unowana padhi hombe ine 192 mapepa akadhindwa mativi ese. Iyo block ine zvitsauko zvina zvakasiyana, chimwe nechimwe chine mitambo mitatu. Iwe une huwandu hwezvirongwa zvemitambo gumi nembiri. Zvakafanana neLegacy board game, mutambo unochinja paunenge uchitamba mitambo. Nemutambo wega wega, mamiriro akajairwa, mabasa ako uye chiyero chemutambo chinoshanduka.
Mukuwedzera, iwe unowana 3 dice: Dice mbiri yebhuruu, iyo inokupa iyo fomu yekupinzwa uye chena kufa, iyo inosarudza rudzi rwechivako (chivako chekugara, nzvimbo yekutengeserana, chivako cheveruzhinji).
Iyo gameplay inogara yakafanana. Unokungurutsa dhayisi ese ari matatu woisa dhayi rebhuruu nenzira yekuti vanokupa chimiro (madiki semicircles padhizi anofanira kuita denderedzwa) wopinda chimiro ichi nemhando yekuvaka yakakodzera (uchishandisa chena kufa). Mitemo yakakosha ndeiyi:
Zvivakwa zvinogona kutenderedzwa uye kuratidzwa, asi zvinofanirwa Zvakakwana pahurongwa pinda.
zvivakwa zvinotenderwa kupera miti namatombo, asi kwete Makomo, masango neminda yenzizi kuitwa.
Chivako chekutanga chinofanira kunge chiri padyo nerwizi, zvimwe zvese zvivakwa zvinofanirwa kunge zviri padhuze nechakatopinda chivakwa (kusanganisira mhiri kwerwizi).
Kana usingakwanisi kana usingadi kupinda muchivako, unogona kukodzera uye inofanira kupenda munzvimbo yakakodzera pachirongwa. Kana pasina nzvimbo yasara uye haugone kana kusada kupinda muchivako, unofanirwa kupedzisa mutambo wega.
Mushure mekunge dhayi rakungurutswa, unogona kutamba mutambo chero nguva zvipere zvako uye haachatambi.
Kana vanhu vese vapedza mutambo wavo pachavo, mutambo unopera uye zvibodzwa zvinotora nzvimbo.
Muti wega wega unoonekwa (kureva kuti hauna kuwakwa zvakanyanya) unokuwanira poindi.
Dombo rega rega rinoonekwa (risina kuwakwa zvakanyanya) rinokupa minus point.
Minda isina chinhu yakakoshawo minus point yega yega (matombo ane miti nematombo haaverenge asina chinhu).
Iyi ndiyo mitemo yekutanga uye yekutanga zvibodzwa mumutambo wekutanga. Nezve mumwe nemumwe mutambo, zvisinei, mimwe mitemo yekurima uye zvibodzwa zvinodiwa zvinowedzerwa. Semuenzaniso, gare gare mabhuroko ane tsime pabhodhi remutambo uye iwe unogona zvakare kuvaka machechi kuwedzera kune zvivako zvataurwa.
Pamutambo wega wega pane tsananguro pfupi mumirayiridzo uye shanduko dzakakodzera pabhodhi remutambo.
Ungave uchitamba wega kana uri muboka hazvichinji chero chinhu mumutambo. Mimwe mitemo, zvisinei, inongoshanda mune yega modhi kana chete mukutamba kweboka. Izvi zvinoratidzwa zvakananga pabhodhi remutambo nechiratidzo chinoenderana.
Zvinhu zvemutambo: dhayi uye mabhodhi emutambo. Mufananidzo: Cosmos
Maonero ekutanga akanaka: Zvirongwa zvemutambo zvinogadziriswa zvakanaka uye zvinopa zvakasiyana, kunyanya nekuda kwezvitsauko zvakasiyana nemitambo. Iyo yakawanda mutambo musimboti zvakare unofadza kwazvo; zvimwe zvakafanana kune mugadziri wemakapu uye munyori wemifananidzo aripo, zvakadaro mutambo wakasiyana zvachose - zvakanyanya nekuda kwemitemo inoshanduka uye mabasa.
Iwo dhayi inzvimbo isina simba kwandiri. Aya akanamirwa, machubhu epurasitiki asina ruzha asingaite ruzha rwakanaka kana cube yakakungurutswa uye zvakare inotaridzika zvakachipa. Izvi zvinosuwisa zvikuru muzvinhu zviviri. Chekutanga, mutsauko wakanyanya kune yakanaka mutambo chirongwa. Chechipiri, mutambo hauna zvakawanda zvemukati; unowana dhayisi nebhuroko. Nehurombo, kana chikamu chichiita sechichipa, chinokwevera mutambo wese pasi.
Kunyangwe ini ndichifungidzira kuti dhayi rinogona kushandiswa zvakare mukufamba kwenguva uye kuti zvimiti hazvizobvire munguva pfupi iri kutevera, kune akawanda madhaisi mitambo kana mitambo ine dhayisi inovimba nepamusoro-mhando dhayisi. Sekuona kwangu, Kosmos yakaponeswa munzvimbo isiriyo pano.
Unofungei mushure mechitsauko chekutanga?
Kutanga mutambo uri nyore kwazvo. Mitemo yacho yakajeka uye yakapfupika. Mitemo yakapfava yakataurwa inoita kuti mutambo uve nyore kutanga nawo. Mitemo yekuwedzera inowedzerwa mumutambo wechipiri uye wechitatu. Mumutambo wechipiri unofanirwa kufunga nezvemhando dzakasiyana dzekuvaka uye mumutambo wechitatu iwe unofanirwawo kufunga nezve tsime.
Mitemo mitsva saka inounzwa kwauri nenzira yekutamba uye haina kukurira. Pamusana pemitemo mitsva, mitambo yacho yakasiyanawo.
Zvisinei, ndine kusava nechokwadi pamusoro pekunakidzwa kwenguva refu. Nokuti panouya nguva apo iwe uchiziva mitemo yose uye ipapo iwe unongova nesarudzo pakati peimwe yemitambo yekupedzisira, ine mitemo yose, kana mutambo wekare une mitemo shoma. Asi nei ndichifanira kudzokera kushanduro yakapfava kana ndatamba mutambo wacho kakawanda? Chitsauko chekutanga kunyanya chinoita sechinobhowa kwandiri - kunze kwekunge ndasuma vatambi vatsva kumutambo.
Kunyangwe ndisati ndatamba mutambo webhodhi weGuta Rangu, ndinoziva kuti kune mabhodhi emitambo maviri; imwe inoshanduka muzvitsauko zvese (iyo yenhaka yemutambo) uye imwe inoshandiswa kwekusingaperi modhi (kureva kudzokorora kutamba).
Neruzivo rwangu rwazvino rwemutambo, ndingadai ndakashuvira vhezheni yakadai: Chivharo chemutambo chandinotamba nacho mukati mechikamu chechikamu uye chivharo chandinogona kushandisa kakawanda kana ndangoziva mitemo yese. Semuenzaniso, nekushandisa bhodhi remutambo rinopusika.
Kosmos 682385 Guta Rangu - Roll & Nyora, Iyo ine mukurumbira... * 13,69 EUR tenga
Kare Epic Mitambo Chitoro: Yese Mitsva Yemahara Mitambo
Inotevera New Lord of the Rings mobile game mumabasa
Zvishandiso zvitsva zvemitambo: T-GT II mijaho yedhiraivha ine rezinesi zviri pamutemo yePlaystation 5